musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Ndiyo Zombie Apocalypse Pamhepo?
Zvakazoitika, iyo zombie apocalypse yasvika! Hupenyu sezvatinoziva hwava kuda kushanduka zvachose! Hapasisina mitambo yeTV, hapasisina mitambo yemavhidhiyo, hapasisina Twitter!?! Tichapona sei!? Uye chimbomira sec, tichadyei?! Hapasisina chikafu chekukurumidza, hapasisina zvitoro zvekofi, hapasisina painodiwa kuendesa chikafu uye hapasisina zvitoro zvegirosari? Chii chatichaita munyika?
Nhau dzakanaka ndedzekuti, musoro wenyaya uyu hausi wechokwadi. Nhau dzakaipa ndedzekuti, hausati wagadzirira. Asi tarisa kudivi rakajeka. Key To Life Supply iripo kuti ibatsire! Tinogona kugadzirira iwe, mhuri yako, shamwari dzako uye kunyange nharaunda yako kune izvi. Nekudzidza kurima chako chikafu, kuita kuti vana vako vajaire kudya zvine hutano, zvinyoro zvekudya zvaunogadzira uye kushanda nenharaunda yako kugovera nekutengesa chikafu ichocho, tese tinogona kupona zombie apocalypse! Sezvineiwo, kukura chikafu chako pachako kunonakidza, kuri nyore pane zvaunofunga, basa shoma pane zvaunofunga, uye haufanirwe kuzviita wega! Iyo Kiyi yeHupenyu Supply mhuri ine zvese zvaunoda. Kuburikidza netiweki yedu yevadyidzani uye nevashandi vedu vane tarenda vevadzidzisi, isu tinogona kukuratidza nzira yekukura yakawanda yemichero nemiriwo.
Pamusoro peizvozvo, kukura organic uye kudzidza dzimwe nzira dzakareruka dzekugadzira manyowa nemarara echirimwa chako, unogona kuvakazve ivhu uye wotonyanya kuvimba nefotereza. Gadheni rako richakura zvakanyanya muivhu rakadzoreredzwa kubatsira zvirimwa kuti zvikure kusvika pakugona kwazvo. Nekubatana nenharaunda yako, munhu wese anogona kutarisa pakukura chimwe chinhu chakati siyanei kuti isu tirambe tichiita zvinonaka zvakasiyana. Kunhonga kwakapfava, kuisa mumagaba, kubvisa mvura mumuviri uye kuchengetedza chikafu zvakanaka kunoita kuti nharaunda irambe ichibudirira, kunyangwe munguva yekupisa kwechando.
Saka munoona, hapana chekunetsekana nazvo! Kunyangwe nyika ikashanduka kuita dongo, haufanirwe kunetseka nezvekudya chikafu chembwa chakapera kwehupenyu hwako hwese. Iwe nenharaunda yako munogona kudya semadzimambo nekuti makawana hunyanzvi uye ruzivo rwunodiwa kuti mupe zvakapusa zvezvido zvevanhu, chikafu chinonaka. Uye nhau dzakanaka ndedzekuti, kunyangwe iyo zombie apocalypse ikasamboita chibereko, iwe ikozvino wave kugona kudzikisa kabhoni tsoka yako, kurarama zvakachengetedzeka, kuvaka yakasimba immune system nekudya mushonga wezvipembenene uye chikafu chemahara chemakemikari, kuwedzera kukosha kwepfuma yako uye. ipa nharaunda yako network yekuzvigutsa. Tinokukurudzira kuti utore danho rekutanga uye ubate isu paKiyi Yekupenyu Hupenyu nguva isati yakwana!